Soomaaligii gabadha ku gowracay Mölndal oo lagu xukumay xabsiga waalida iyo musaafurin | Gaaloos.com
Home » News » Soomaaligii gabadha ku gowracay Mölndal oo lagu xukumay xabsiga waalida iyo musaafurin
Soomaaligii gabadha ku gowracay Mölndal oo lagu xukumay xabsiga waalida iyo musaafurin
Wiilkii Soomaaliga ah ee gabadha ku dilay magaalada Mölndal ee duleedka Göteborg bilowga bishii Janaayo ayaa maxkamadi isbuucaan ku xukuntay in lagu hayo daryeelka dadka waalan (maanokoobiyo) ka dib markii dhaqaatiirtu sheegeen in uu waalanyahay. Dhaqaatiirta ayaa sheegay in xiligii uu ninkaan gabadha dilka u geystay iyo marka laga qaaday baaritaanka caafimaadka uu ahaa mid madaxa looga jiro.
Ninkaan oo markii hore da’diisa lagu sheegay 15-sano jir, ayay Laanta Socdaalka sheegtay in uu ka weynyahay 18-sano. Ninkaan ayaa sidoo kale lagu xukumay in wadanka laga musaafuriyo marka uu xabsiga dhamaysto isla markaana 10-sano laga mamnuuco in uu dib ugu soo laabto Sweden.
Wiilkaan ayaa middi ku dilay gabar u dhalatay wadanka Lebanon oo 22-sano jir ah taasoo ka mid ahayd shaqaalaha guriga uu ku noolaa.
Dilka uu geystay wiilkaan ayaa argagax weyn ku dhaliyay Swedishka, ka dib markii uu si xun midi ugu dilay gabadha 22 jir ah oo ka mid ahayn shaqaalaha guriga uu ku noolaa. Ninkaan ayaa Sweden isaga dhiibay qaxooti oo go’aan ka sugayay Laanta Socdaalka.
Title: Soomaaligii gabadha ku gowracay Mölndal oo lagu xukumay xabsiga waalida iyo musaafurin
Posted by galmada Net, Published at 6:00 AM and have 0 comments